ကျောက်ဆည်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် အဖြေလွှာ စာရွက်အချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျောက်ဆည်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် အဖြေလွှာ စာရွက်အချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, October 01, 2016 News No comments
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့ရှိ ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ငါး နာရီဝန်းကျင်တွင် ယခုနှစ်ဖြေဆိုထားသည့် အဖြေလွှာစာရွက်အချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီဌာနရုံးမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုတွင် ကျောင်းဆောင်အားမီးစွဲလောင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း အဖြေလွှာအချို့ မီးလောင်ပျက်စီး ခဲ့ပြီး နံနက် ငါး နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် မီးလုံးဝညှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကာ တရားခံကို အမူဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
"မြို့နယ်မှူးကိုတာဝန်ပေးထားတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ သွားပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ ပြန်လာမှ အဖြေ သိရမှာပါ။ မီးရှို့ခံရတာ နံနက်ပိုင်းပါ။ လတ်တလောအရ ခန့်မှန်းခြေနဲ့ ပြောတာဆိုတော့ ကျောင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျောင်းသားလို့ယူဆတာပါ။"ဟု ကျောက်ဆည်ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇင်ထွန်းကပြောသည်။
ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ အဖြေလွှာအချို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းလုံခြုံရေး တာဝန်ခံ ဦးတင်ထူးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ၎င်းက ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်သာ ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး အဖြေလွှာအရေအတွက် မည်မျှဆုံးရှုံးသွားသည်ကို မသိရသေးပေ။ မီးလောင်ကျွမ်းမူကြောင့် အဖြေလွှာအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး တန်ဖိုးခုနှစ်ထောင်ကျပ်ဖြစ်ကာ ကျောက်ဆည်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် (ပ) ၆၃၇/ ၂၀၁၆၊ ပြစ်မူပုဒ်မ(၄၃၆)ဖြင့် အမူဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
Huawei ဖုန်းအားလုံးအတွက် IMEI Repair Tool 100%
မင်္ဂလာပါချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး ဒီနေ့ အစ်ကိုကျော်ထူးပို့ပေးလာတဲ့ စပါယ်ရှယ် ပိုစ့်တစ်ခုကို Huawei ချစ်သူများအတွက် အပြေးကလေးလာပြီး မျှဝေပေးလိုက်တယ်...
Huawei ALL MTK SP FlashTools Firmware Collection
(1) G520-T10-V100R001CHNC01B318_SP Flash Firmwarew >>> Download (2) Y511-U30 Sp Flash Firmware >>> Download (3) Hu...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုစာကြည့်တိုက်မှာ ကတ်ဆက်အသံဇာတ်လမ်းများ အဖြူအမည်ရုပ်ရှင်များ နှင့် သီချင်းများကို နားထောင်လို့ရပါပြီး.... မိသ...
ဝိဇ္ဖာရှစ်သောင်း ဆရာအပေါင်း Album ပါ။ အခြားကျန်ရှိနေသေးသည့် ထွက်ရပ်ပေါက်ဝိဇ္ဇာကြီးများရဲ့ ပုံတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အခြားပုံများရှိပါကလည်း...
ခင်မောင်တိုး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးရယ် ၀၁။ ချစ်ပြီးမှမုန်းမေ့တတ်တဲ့မင်းကို - ခင်မောင်တိုး ၀၂။ ကျေးဇူးတင်တယ်ကမ္ဘာကြီးရယ် - ခင်...
TELECom Android Anti-Malware 5.0 (Latest Version)
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ပျောက်ရန် သဘာဝနည်းလမ်း
I Mobile နဲ့ တစ်ခြာ MTK [MT6575/ 6577/ MT6572/ MT6...
'အာဘွား' - Kisses as Monthly Pay.....
Who do you love more, Mum or Dad...?
'အတွေ့အကြုံ - Experience....'
If you plant honesty, you will reap trust....
The blind man withalamp.....
PC ၀င်းဒိုးတက်တဲ့အခါ BOOTMGR is missing Press Ctr...
ထိုင်းဘုရင့်သမီးတော်သီရိဒုံကို ရင်နင့်စေသော ခမည်းေ...
Blogger - Add scroll Box for Archive and Labels
#သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (သို့)#အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ (သ...
16.10.2016 Thai lottery results ၉၄၇ ထွက်သွားပါပြီး...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများသို့ -
ထင်းရှုးရွာ လေယာဉ်ကွင်းကမ်းခြေ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်
ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော သက်တော် ၈၈ နှစ်အရွယ်တွင် ကံတော...
၁၉၄၂ ခုနှစ် ရခိုင်သမိုင်းမှာ ဒီလိုပုံရိပ်တွေ ရှိခဲ...
" ကျန်းမာချို့ ယွင်းသူများ နှင့် အိုမင်းနေသူတို့ အ...
Oppo F1 ဖုန်းကို TWRP recovery ထည့်သွင်းပြီး Root ...
ဖုန်းမှာ ဒေါင်းခြင်တာအမြန်ဒေါင်းနိုင်မယ့် - Advanc...
တကယ်ပျော်ချင်သူတိုင်းလွှတ်ချသင့်တဲ့ (၁၅) ချက်
မောင်တော တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ တုံ့...
“ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ပြီး စီးနင်းတိုက်ခိုက...
ကျီးကန်းပြင်နယ်ခြားစောင့်စခန်းကို ဘင်္ဂါလီ ၉၀ ခန့် တ...
♪ ANDROID USER တွေအတွက် အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး...
♪ “အွန်လိုင်းပေါ်မှ လူစိမ်းများ” ♫
နယ်ခြားစောင့် ၃ ဦး လည်လှီးအသတ်ခံရပြီး လက်နက် ၁၀၀ ...
ဤကမ္ဘာကြီး ဤလောက၌ နေထိုင်ကြကုန်သော အားလုံးအားလုံးမျ...
Picget PhotoShine 5.5 + Serial Key PC
1.10.2016 ချဲ၃လုံး ၁၀၂ ထွက်သွားပါပြီး
ကျောက်ဆည်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် အဖြေလွှာ စာရွက်အချို့...
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်တဲ့ စာရင်းထဲ မြန်မာပါဝင...
Shareပေးခြင်းဖြင့် တရား ၁၁၈ပုဒ် ဓမ္မဒါန အလှူရှင်အဖြ...